I-China Professional Factory yeChina SAE J1772 Level 2 switchable Reserve EV Ishaja yokwakha kanye nefektri | I-Joint Tech
Siphinde sethule umkhiqizo noma insizakalo yokuhlonza kanye nemikhiqizo yokuqinisa indiza nezinsizakalo. Sinezindawo zethu zokukhiqiza nendawo yokusebenzela. Singakunika kalula cishe lonke uhlobo lomkhiqizo noma insizakalo exhunywe entweni yethu ehlukahlukene yeProfessional Factory yeChina SAE J1772 Level 2 switchable Reserve EV Ishaja, "Guqula lokho kuthuthukile!" yisiqubulo sethu, okusho ukuthi “Imbulunga engcono iphambi kwethu, ngakho-ke asijabule!” Shintsha ube ngcono!
Iziteshi zokushaja izimoto ze-JNT-EVC10 zakhiwe ngabafundi bamakhadi we-RFID wokuhlonza umsebenzisi. Ngomklamo we-ergonomic oguquguqukayo, ungabekwa odongeni noma enyaweni ngenkathi unikezela ngecala lokushaja elihlukile. I-JNT-EVC10 ikuvumela ukuthi ungeze kalula ukushaja kwezimoto zikagesi njengenzuzo eyengeziwe ekwamukeleni izihambi, emahhovisi, komasipala nakwezinye izindawo eziningi zokuhweba.
Kwakhelwe ukulungela inethiwekhi (i-LAN, i-4G, noma i-Wi-Fi) ukuxhuma kwisoftware yokuphatha ehambelana ne-OCPP yomuntu wesithathu.
Ukulungiswa kokumiswa kwesisekelo sodonga noma okuzimele okusebenza ngaphakathi komthamo wesifunda sakho ukunciphisa izindleko zokufaka.
Ukuqinisekiswa okuphephile kwe-RFID kuvumela ukufinyelela kuzishayeli ze-EV.
Ipulaki elijwayelekile le-SAE J1772 ™ elihambisana nezimoto eziningi ezisebenza ngogesi nogesi.
I-4.3, LCD ukubonisa yonke idatha yemoto esiteshini sokushaja ngesikhathi sokushaja. Uyabona isimo sokushaja, kufaka phakathi i-current, voltage kanye nethempelesha. Izikulufo ziyanela ebhokisini ngakho-ke akudingeki ukhathazeke ngokuwa kwesikrini. Ikhebula le-18ft noma i-25ft lishiya isikhala esanele phakathi kwemoto nesiteshi sokushaja.
Isiteshi sinesilinganisi samandla esilinganisela isiteshi lapho kusebenza khona ugesi omningi.
Ngakho-ke isiteshi singasebenza ngaphansi kwamandla amanje, sigweme ikhefu nezinye izingozi zokuphepha ezibangelwa ukungazinzi kwamanje.
Yonke imikhiqizo yethu iyi-ETL / CE, ikhwalithi ithembekile. Ishaja yethu ye-EV iyahambisana nezimoto eziningi zikagesi ezihambisana nezinga le-SAEJ1772.
Langaphambilini 7kw EV Household Ukushaja Ikhebula Ishaja nge TUV Ce RoHS
Olandelayo: I-11.5kw AC EV Ishaja Yokuhweba Uhlobo Lokushayela Imoto Isiteshi Solar EV
Ishaja Yenqwaba Yesiteshi
Isiteshi Sokushaja Amabhasi saseChina
I-China Manufacturer Wall-Mounted EV Car Charge
Inqwaba Yezimoto Zikagesi
Inqwaba yeshaja ye-EV
Isigaba Sesithathu Seshaja
Supply OEM Commercial Electric Vehicle Ukushaja ...
Izinga 2, 240 volt yemoto kagesi (EV) ishadi ...
SAE J1772 China Umkhiqizi Wall-egibele EV Ca ...
Level 2 EV Ishaja Unit nge Uhlobo 1 Outlet 16A ...
EV Ukushaja Station Wall-egibele Electric Charg ...